Muslimiinta ku faraxsan amarka Biden ee ah in laga qaado xayiraada safarka! - Axadle
Muslimiinta ku faraxsan amarka Biden ee ah in laga qaado xayiraada safarka! – Axadle
Muslimiinta ayaa bogaadiyey guushii madaxweyne Joe Biden ee doorashada iyagoo si xamaasad leh u muujiyey tobanaan kun oo muslimiin ah oo ku xirnaa Mareykanka afartii sano ee la soo dhaafey taas oo ka dhalatey “mamnuucida Muslimiinta” ee Trump.
In ka badan 42,000 oo Muslimiin ah ayaa laga horjoogsaday inay galaan Mareykanka intii u dhexeysay sannadihii 2017-19, inta badanna waxay ka yimaadeen dalal u badan Muslimiin sida Iran, Soomaaliya, Yemen iyo Suuriya. Fiisooyinka muhaajiriinta ee la siiyo muwaadiniinta dalalkan ayaa hoos u dhacay 79% isla muddadaas, sida lagu sheegay qiimeyn.
Soomaalida ayaa ka mid ahayd dadka sida weyn uga soo horjeedey madaxweyne Trump, halka madaxweyne Biden uu soo dhoweeyey doorashadiisa.
Arrintan ayaa loo aaneynayaa arrimo dhowr ah oo u dhexeeya Trump iyo Soomaalida. Laakiin Biden si ka duwan ayuu uga fakaraa Trump markay tahay Soomaalida.
Markii Trump loo doortay madaxweynaha Mareykanka, talaabooyinkii ugu horeeyey ee uu qaaday waxaa ka mid ahaa in la mamnuuco soogalootiga iyo dadka ka safraya dalal muslimiin gaar ah oo ay ku jirto Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale gebi ahaanba hakad ku yimid soogalootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Mareykanka, go’aanka Trump.
Tani waxay si toos ah u taabatay Soomaali badan, oo qaarkood rajo weyn ka qabeen inay u safraan Mareykanka, halka kuwa kalena ay sugayeen uun duulimaad.
Laakiin mowqifka madaxweyne Biden wuu ka duwan yahay kii isaga ka horreeyay, shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay tan iyo markii uu xafiiska la wareegayna waxay ahayd inuu meesha ka saaro amarkii madaxweynaha ee Donald Trump uu ku mamnuucay soo galootiga muslimiinta ah.
100 maalmood ee maamulkii ugu horeeyey, Biden waa laga takhalusi doonaa raadadka Trump, wuxuu ku rakibay madaxweynaha cusub inuu saxeexay 10 iyo 19-looga hadlo cudurka cinwaanka Covid Trump ee ah inuu dhab ahaantii la kulmay dagaallankiisa.
Al-Shabaab kills Djiboutian soldier in the future after raid
Shaxda Chelsea vs Luton Town